Doorashada Sweden oo goob joogeyaal loo soo diri doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waraaqaha codeeynta iyo goob laga codeeyo. sawir: PONTUS LUNDAHL / TT
Doorashada Sweden oo goob joogeyaal loo soo diri doono
La daabacay måndag 20 augusti 2018 kl 13.30
Ururka wada shaqeeynta iyo ammaanka Yurub oo magaciisa loo soo gaabiyo OSSE ayaa markii ugu horreeysay laba hor joogeyaal u soo diri doona doorashada ka dhici doonta Sweden 9-ka bisha sebteembar.
-Waa markii ugu horreeysay taariikhda oo doorashooyin ka dhacaya dalka Sweden aannu u soo dirno howl-wadeenno hor joogeyaal, sida uu sheegay Thomas Rymer, af hayeen u hadlay ururka OSSE.
Rymer, ayaa sheegay inuu ururku guddi u soo diray doorashadii dalka ka dhacday 2010 sidii lagu ogaan lahaa in loo baahan yahay in doorashada qudheeda loo soo diro kor joogeyaal, middaasina oo aan loo arag inay baahiyi ka jirto.
Sannadka ayaa tallaabadii oo kale la qaaday iyadoona la go’aansadey in loo soo diro laba ruux sidii ey kor joog uga noqon lahaayeen doorashada Sweden ka dhici doonta. Go’aankaasina oo ka dambeeyay kolkii lala xaajoodey siyaasiyiin, saxaafadda iyo abaabuleyaasha doorashada qudheeda.
Waxyaabaha loo baahan yahay in si gaar ah loo eego ayay ka mid tahay dhanka maalgelinta doorashada, sida uu sheegay Thomas Rymer.
Wixii ka dambeeyay hir galkii xeerka dul kala socodka maalgelinta ololaha doorashada ee xisbiyada oo biloowday gu’gii ayuu ururka OSSE ku talo jiraa sidii uu u kor meeri lahaa habka loo diiwaan geliyey maalgelinta ololaha doorashada ee xisbiyada iyo daaqadaha ey dhaqaaluhu ka soo galeen.
Waxaa sidoo kale la aqoonsaday iney dhibaatooyin ka jiraan habka waraaqaha codeeynta loogu meeleeyo xarrummaha doorashada, sida uu sheegay Thomas Rymer. Xaqiiqdii ma aaney aheyn kuwo qarsoon si ay hayadda doorashooyinku u xaqiijiso sir ahaantooda, sidoo kale waxaa caddaatay in goobaha qaarkood aaney oolin waraaqaha codeeynta xisbiyada ee ku filan, gaar ahaan tuulooyinka qaarkood, sida uu sheegay.
Ururka OSSE ayaa xoogga saartay horraantii doorashooyinka ka dhaca waddammada lagu magacaabey dimoqoraadiyadda cusub, sida uu sheegay Thomas Rymer, hase yeeshee aan loo baahnayn in la buunbuuniyo labada hor jooge ee loo soo direyo doorashada Sweden ka dhici doonta, waayo ma jiraan doorashooyin 100% sax u dhaca, sida uu sheegay Thomas Rymer, ahna af-hayeen ka howlgala ururka wada shaqeeynta iyo ammaanka Yurub - OSSE.